संघीयता होइन, संघवाद
अंग्रेजीमा ‘इज्म’ लागेका शब्दको नेपाली अनुवाद ‘वाद’ हुन्छ । जस्तै– सोसलिज्मको समाजवाद, कम्युनिज्मको साम्यवाद, क्यापिटालिज्मको पुँजीवाद, फासिज्मको फासीवाद, अनार्किज्मको अराजकतावाद, फेमिनिज्मको महिलावाद आदि । तर, ‘फेडेरालिज्म’लाई ‘संघवाद’ नभनेर ‘संघीयता’ भनियो । किन होला ?
किन समाजवादलाई समाजीयता, साम्यवादलाई साम्यता, पुँजीवादलाई पुँजीयता, फासिवादलाई फासीयता, अराजकतावादलाई अराजकीयता र महिलावादलाई महिलायता भनिएन ? किन संघवादलाई मात्र संघीयता भनियो ? यसको कारण थियो । कारण त थियो नै, संगसंगै नेपालमा संघवादको विमर्श र यात्रालाई गलत बाटोतिर मोड्ने प्रारम्भ विन्दू पनि यही थियो ।
संघवाद कुनै राजनीतिक विचार हैन, राज्यको संरचना निर्माण गर्ने एउटा तरिका मात्र हो भन्ने बुझाईबाट नेपालमा संघवादलाई संघीयता भन्न थालिएको थियो । संघवाद संचरना त हो नै तर, संरचना मात्र हैन । संघवादका मुख्य तीनवटा आयाम हुन्छन् ।
एक– संघवाद राजनीतिक विचार हो । बहुलवादको दर्शनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।
दुई– संघवाद राज्यको संरचना र प्रणाली निर्माण गर्ने एक विधि वा पद्धति हो ।
तीन– संघवाद एक मनोवैज्ञानिक मर्म, भावना र राजनीतिक संस्कृति हो । जब यी तीन चिज एक अर्कासंग अविछिन्न हुन्न, अनि मात्र संघवाद जीवन्त र परिणाममुखी हुन्छ ।
अहिले लागू गरिएको ‘संघीयता’ त्यस्तो हैन । यसको दोस्रो अर्थ– केवल संचरनाको अर्थमा मात्र बुझिएको संघीयता हो । यसले परिणाम दिएन भनेर गुनासो गर्नु नै बेकार हो । किनकी यो एकांकी छ । यस्तो संघीयताले ठीक परिणाम दिँदैन । ठीक परिणाम दिन संघवादलाई संघवाद नै हुन दिनुपर्दछ, संघीयता बनाउनु हुँदैन ।
यस्तो किन भयो त ? किनकी जो संघवादका पक्षधर थिए, उनीहरुसंग शक्ति थिएन । जो संग शक्ति थियो उनीहरु संघवादका पक्षधर थिएनन् । शक्तिशालीहरुले संघवादलाई संघीयता बनाइदिए । फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोको भनाई यहाँनेर चरितार्थ भयो । फुको भन्थे– शक्तिले सत्यको परिभाषा बदल्न सक्छ, त्यसैलाई ‘संकथन’ भनिन्छ ।
नेपालमा कांग्रेस–कम्युनिष्टको शक्तिले संघवादको सत्यलाई संघीयताको संकथनमा बदल्यो । शक्तिको ‘न्यारेटिभ’ संघवादको साटो संघीयता बन्न पुग्यो । जो विकृत र भ्रान्त धारणा थियो । उल्टो भयो । आज केही मान्छेहरु त्यही भ्रान्त धारणामा बनेको संघीयतालाई देखाएर असफल भएको तर्क गर्दैछन् जो यथार्थमा संघवाद नै हैन ।
जस्तो कि अहिले हामी कहाँ समाजवाद छैन । तर, कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवै आफूलाई समाजवादी भन्छन् । यदि उनीहरुको व्यवहारलाई नै समाजवाद ठानेर समाजवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो समाजवादप्रतिको अन्याय हुन्छ ।
संघवादबारे पनि ठीक त्यस्तै कुरा हो । अहिलेको संघीयतालाई नै संघवाद ठानेर असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो संघवादप्रति अन्याय हुन्छ । यहाँ केही संघीयता विरोधीहरु छन नै । जस्तो कि– चित्रबहादुर केसीदेखि भीमार्जुन आचार्यसम्म, कमल थापादेखि विश्लेषक सौरभसम्म कनीकनी संघीयताको असफलता गनिरहेका हुन्छन्, यो संघवादलाई हिर्काएको भ्रममा संघीयताको पुतलामाथि जोडजोडले किक–बक्सिङ्ग हान्ने मूर्खतापूर्ण उपक्रम मात्र हो ।
प्रश्न उठ्छ अब के गर्ने त ? यस्तै भयो । मतदाताले त्यस्तै मान्छे र शक्तिलाई साथ दिए । संघीयतालाई कसरी सुल्ट्याएर संघवाद बनाउने ? यो जटिलताको उत्तर पनि दार्शनिक फुकोको एक वाक्यमा पाइन्छ । उनी भन्थे– सूचनाबाट ज्ञान, ज्ञानबाट संकथन, संकथनबाट शक्ति र शक्तिबाट सत्यको स्थापना हुन्छ । संघवादको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया पुरा भइसकेको थिएन ।
फेरि उदाहरणमा हेरौं । जस्तो कि लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई मतदाताले एकैपटक बुझेका वा स्वीकार गरेका थिए ? अवश्य थिएनन् । अहिले स्वीकार्य छ किनकी त्यसको संकथन लामो थियो । विक्रम सम्बत् १९९० देखि नेपाली समाजमा लोकतन्त्रको बहस थियो । सूचना र ज्ञान समाजमा प्रवाहित भइरहेका थिए । जस्तो कि– २००७ सालदेखि संविधानसभा र गणतन्त्रको बहस थियो ।
तर, संघवादको बहस त्यति लामो हुन पाएको छैन । अहिले नै मतदातालाई दोष लगाउने बेला भएको छैन । त्यो २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पक्ष विजयी थियो भनेर जनता लोकतन्त्र चाहदैनथे भन्ने निष्कर्ष निकाले जस्तो हुन्छ । तराई कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी जस्ता केही पार्टीले स्वशासन, भाषिक अधिकार, समावेशिता र आरक्षणको कुरा गरेका थिए । संघवादको कुरा गरेका थिएनन् ।
संघवादको कुरा कहिल्यै कांग्रेसले गरेन । एमालेले गरेन । मसालले गरेन । मालेले गरेन । नेमकिपाले गरेन । माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले मात्र गरेका थिए । त्यति शक्तिका आधारमा जति संघीयता आएको छ, त्यो पनि अहिलेलाई कम हैन ।
माओवादीले युद्धकालमा संघवादी ढाँचामा नै पार्टी संगठन बनाएको थियो । अन्तरिम संविधानका बेला त्यो छोडेको निक्कै ठूलो मूल्य चुकाउन पर्‍यो । त्यही ‘राजनीतिक स्पेश’मा मधेशी जनअधिकार फोरम आयो । अहिले हिजोको माओवादी ४ धारमा विभक्त छ ।
प्रचण्ड धार एमालेमा मिसिन पुगेको छ र नेकपा बनेको छ । बाबुराम धार समाजवादी बन्न पुगेको छ । विप्लव धार फेरि एकीकृत क्रान्ति र जनयुद्धको तयारी गर्दैछ । मोहन बैद्य धार जनविद्रोह उठाउने प्रयास गर्दैछ । हिजोको माओवादीको उत्तराधिकार कस्लाई मान्ने ? कम्तीमा संघवादका सन्दर्भमा ।
फेरि उदाहरणमा जाऔं, प्रचण्ड नेकपामा ओली सँगसँगै छन् । संघवादको सवालमा यी विल्कुल फरक ध्रुव थिए हिजो । प्रचण्ड सोलुखुम्बु पुगेर शेर्पाल्याण्ड घोषणा गर्थे । ओली पहिचानलाई गुन्द्रुकको झोल भन्दा पनि काम नलाग्ने चिज भन्थे । आज एकीकृत नेकपामा कुन विचार हावी छन त ? प्रचण्डको कि ओलीको ? निश्चय नै ओलीको । त्यसो भए कम्तीमा संघवादको मुद्दामा नेकपा हिजोको माओवादीको उत्तराधिकार हैन ।
विप्लव र बैध त यसै पनि त्यसको उत्तराधिकार हैनन् । उनीहरुको असन्तुष्टि नै नेपाल ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ तिर नभएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ तिर गयो भन्ने हो । कुरा प्रष्ट छ– वर्गले सिद्धान्तलाई आधार मान्दछन् । त्यहाँ पहिचान र सीमान्तकृत समुदायको प्रश्न नै गौण भएर जान्छ । यी तथ्यहरुले माओवादी आन्दोलनभित्रको संघवादको उत्तराधिकार बाबुराम धारसंग छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।
अहिलेको समाजवादी पार्टी– यसको आकार र भोटको विश्लेषण गर्न अझै केही बर्ष पर्खिनुपर्छ । कम्तीमा त्यहाँ हिजोका मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी पार्टी, खस समावेशी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी एक ठाउँमा छन् । यसको अर्थ– संघवादको शक्तिकेन्द्र यही हो भन्ने बिषयमा कुनै भ्रम राख्न जरुरी भएन ।
तर यो पार्टी कहिले शक्तिशाली होला र वास्तविक संघवाद आउला ? यो निक्कै कठिन र चुनौतिपूर्ण प्रश्न हो । कपितयले नेकपाको शक्ति ओलीपछि प्रचण्डमा आएमा त्यो काम नेकपाबाटै सम्भव हुने धारणा राख्दछन् । त्यसो हुन सक्ला ? राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही हुन्न । तर, हिजोको एमाले पंक्तिले सजिलै त्यसो हुन दिने छैन ।
कांग्रेस नि ? कांग्रेसका दर्जनौं गल्ती किन नहुन्, तर यो रिजिट पार्टी भने हैन । यो पार्टीको जम्माजम्मी सिद्धान्त बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र थियो । आज नेपाल जहाँ छ कांग्रेसले आफ्ना सिद्धान्तभन्दा पर पुगेर धेरै कुरा स्वीकार गरेको छ । गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ । संविधानसभा स्वीकार गर्‍यो । धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको छ । आरक्षण र अर्ध समानुपातिक प्रणाली स्वीकार गरेको छ ।
अर्थात् कांग्रेस आफ्नै सूचना, ज्ञान, संकथन, शक्ति र सत्यले नयाँ मुद्दाको पहलकदमी लिने पार्टी हैन । तर जब समाजमा परिवर्तनको लहर आउँछ, उसले स्वीकार गर्दिन्छ । कांग्रेसको यो चरित्र हेर्दा कुनै दिन यो पार्टीले संघवाद स्वीकार गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
अनि नेकपा नि त ? के नेकपा ओलीज्म मै अररो रहला ? यसका केही शर्त हुनेछन् । जस्तो कि आगामी दिनमा मतदाता मनोविज्ञान कस्तो बन्ला ? मत परिणामको प्रवृति कस्तो देखिएला ? आउने निर्वाचनसम्म संघवादीहरुले एउटै केन्द्र बनाउने र कम्तीमा २५ लाख ल्याउने हो भने नेपालको राजनीति आउने ३ बर्षपछि अर्कै हुन्छ ।
अन्यथा नेकपा रिजिट नै रहन्छ । किनकी नेकपा सिद्धान्तच्यूत भइसकेको संगठनात्मक शक्ति हो । यसले सबै कुरालाई पार्टीको चुनावी अस्तित्वसँग जोडेर हेर्छ । संघवादको विचार लोकप्रिय हुँदै गएमा ओलीलाई विस्तारै सबैले बिर्सने छन् । प्रचण्डले तीन हात उफ्रेर मतदातालाई हिजो सम्झाउन थाल्नेछन् । संघीयतालाई संघवादमा परिणत गर्न सकिने वा नसकने कुरा संघवादी केन्द्रले आउने दुई वर्षभित्र आर्जन गर्ने शक्तिमा भर पर्दछ ।
नेपालमा केही बुद्धिजीवीहरु छन् जसलाई कि त वामपन्थी पपुलिज्म कि त दक्षिणपन्थी पपुलिज्मले गाँजेको छ । एक्काइशौं शताब्दिको पहिलो दशकपछि विश्व राजनीतिको समस्या नै पपुलिज्म हो, चाहे त्यो वामपन्थी होस् वा दक्षिणपन्थी । ट्रम्प र मोदीजस्ता दक्षिणपन्थी हुन् वा ओली र सि जिङ पिङजस्ता वामपन्थी– यी सबैको आधार बर्चश्ववादी समुदायको मनोविज्ञानमा आधारित राष्ट्रवाद हो जसलाई हिजोआज ‘मेजोरिटारियन डेमोक्रेसी’ भन्न थालिएको छ ।
जसरी प्रकृतिमा वायुको दिशा परिवर्तन भइरहन्छन्– कहिले पश्चिमी वायु, कहिले पूर्वी वायु । यदाकदा आँधीहुरी, चक्रावत र सुनामी पनि । राजनीतिकोे पनि मौसम हुन्छ । एजेण्डमा विश्वास गर्नेहरुले ‘एन्टी–करेन्ट’ उभिनै पर्छ । विपरित दिशा वायू बगिरहेको बेला धेरै सफल यात्रा गर्न सकिन्न । तर वायुको दिशा बद्लिने मौसम पनि आउँछ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
नेपालको संघीयतामा केके कमजारीहरु छन्, कसरी त्यसलाई संघवादमा बद्ल्न सकिन्छ, सायद यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालको मनोसामाजिक सिकाईलाई कसरी ‘डि–लर्न’ गर्ने सबैभन्दा बढी चुनौति त्यहाँनेर छ । बर्चश्व (हेजिमोनी) र प्रतिबर्चश्व (काउन्टर–हेजिमोनी) को लडाईमा वि-बर्चश्व (डि–हेजिमोनी) को अवधारणा बुझाउन सजिलो छैन । अबको सूचना, ज्ञान र संकथन यहीनेर केन्द्रित गर्न जरुरी छ । अनि मात्र नयाँ शक्तिको जन्म र नयाँ सत्यको स्थापना सम्भव हुनेछ ।
जस्तो कि– झापाका केपी ओलीले कर्णालीपारीलाई ‘सुदूरपश्चिम’ देख्नु स्वभाविक थियो । झापाबाट दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर सुदूर पश्चिममा नै छ । तर शेरबहादुर देउवा । भीम रावलले किन आफ्नै ठाउँलाई सुदूरपश्चिम देखे तर, झापालाई सुदूरपूर्व देख्न सकेनन् ?
पाउलो फ्रेरीले पेडागोजी अफ अप्रेष्डमा भनेका छन्–‘स्वतन्त्रता भन्ने कुनै चिज संसारमा छैन, त्यो बन्धनकारी तत्वसंग प्रतिरोध गर्ने क्षमतास्तर हो । जसले जति बढी प्रतिरोध गर्दछ, उसले उतिनै बढी स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दछ । ठीक त्यसैगरी शोषणको मात्रा भनेको शोषकले कति शोषण गर्दछ भन्ने कुरामा मात्र निर्भर हुँदैन, शोषितले कति बराबर शोषण स्वीकार गर्दछ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ ।’
पहिलो- पहिचान भनेको केवल कुनै नश्ल समुदाय हैन, त्यसमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, सभ्यताको भौगोलिक क्षेत्र र मनोविज्ञानसमेत जोडिएको हुन्छ । २४० बर्षसम्म दमित भएको यी चिजहरु केवल १० वर्ष पुनर्ताजगी हुन सम्भव थिएन । तसर्थ, संघीयतालाई संघवादमा बदल्न परिपक्कताको समय (म्याचुरिटी पिरियड) पनि नपुगेकै हो ।
दोस्रो– समानता र समरुपताबीचको भिन्नता राजनीतिक विमर्शमा खासै बनेन । जैविक विविधताको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेहरु नै मानवीय विविधताको नष्ट हुनुपर्दछ भन्दै हुन्छन् । जबकी यी दुई अवधारणा बीच खासै भिन्नता छैन । विविधता प्राकृतिक हो । विविधता समस्या हैन । समस्या विविधता आधारित विभेद जन्मिएपछि हुने हो । ‘विविधता’, ‘विभेद’, ‘समरुपता’ र ‘समानता’ जस्ता शब्दहरु बीच हुने भिन्नता फेरि एकपटक राजनीतिक बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
तेस्रो– संघवादसंग क्षेत्रीय विकास र वित्तिय संघवादको प्रश्नलाई अझ बढी जोड्नु हो । सोलुखुम्बुको मान्छेले विराटनगर राजधानी हुने प्रदेश पाए भनेर किन खुशी हुनु पर्ने हो ? दार्चुलाको मान्छेले सबै स्रोत साधन र शक्ति धनगढीतिर बग्ने संघीयता पाउँदा किन खुशी हुनुपर्ने हो ? त्यसले सोलु र दार्चुलालाई के फाइदा हुन्छ वा हुँदैन ? यी प्रश्नहरु पुनर्जागित हुनुपर्दछ ।
(खतिवडा समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव हुन्)
वर्तमान सरकार कतै सद्दामपथमा त हिंडेकाे छैन ?
श्रीलंका निर्वाचनः राजापाक्ष परिवार अझ शक्तिशाली भएर सत्तामा रहने सङ्केत
नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाका लागि राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छः अध्यक्ष थापा
बालुवाटारलाई ‘धोबीघाट’ गठबन्धनको झस्को, शीर्ष नेतालाई ‘विदेशी चलखेल’मा लागेको आरोप
देश, प्रदेश ५, राजनीति
सरकारले उल्लेख्य काम गरेको छ, जनस्तरबाट स्वागत हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री पोखरेल
हाम्रो विवेक, क्षमता र संवेदनशीलताको परीक्षण भएन र ?
प्रचण्डलाई वामदेवको जवाफ- म कुनै गुटमा लाग्दिनँ
कस्तो हुनुपर्छ संघीयताको अर्थराजनीतिक स्वरुप ?
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरण भएको आज झण्डै डेढ दसक बितिसकेको छ । यो अवधिमा हामीले केही राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा गणतन्त्र,...
किसानका लागि उन्नत कृषि प्रविधिमा पहुँचः कहिले र कसरी ?
कृषि उत्पादन बढाउनु र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै कृषि क्षेत्रको लक्ष्य हो । कृषिमा उत्पादन बढाउन केही उपायहरु...
चितवन, २४ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा चासो अगाडि बढाएका छन् । उनले शुक्रबार माडी...